Kunyangwe paine njodzi, kuchena kweganda kunonyanya kufarirwa kupfuura nakare kose
Kuchenesa kana kuchenesa inyaya inopokana zvikuru. Inopa zvinokwezva nzira dzekuvandudza rako. Kune nzira dzakawanda dzekugadzira ganda kureruka. Izvi zvinosanganisira anokosha ganda makirimu uye laser kurapwa. Nekuda kwemutengo wayo wakaderera uye chengetedzo yepamusoro, vanhu vazhinji vanosarudza mafuta ekuzora. Kana iwe uri c ...
Chekutanga pane zvese, chii chinonzi boric acid? Boric acid imhando yezvinhu zvemabhizimusi mbishi, iri chena hupfu. maflakes zvakare anogona kupihwa, Iyo yakakosha indasitiri mbishi zvinhu zvekugadzira girazi, ceramics uye mishonga yekuuraya zvipuka. Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, mukana wekubata nayo mudiki kwazvo, tinogona kazhinji ...
Nhanganyaya Pfupi yeChlorine Dioxide
Mumakore achangopfuura, hutachiona hwakawanda hwekufema hwakaitika pasi rese, uye mishonga inouraya utachiona yakaita basa rakakura mukudzora denda iri. Chlorine dioxide disinfectant ndiyo yega-inoshanda-inouraya utachiona pakati pezvizivikanwa zvepasi rese klorini-ine mishonga inouraya utachiona. Chlorine ...
NMN yakachengeteka here? Inogona here kushandiswa kwenguva refu?
NMN chinhu chakakurumbira chinorwisa kuchembera mumakore achangopfuura, asi chave chisiri pasi pemakore mashanu kubvira zvapinda chaizvo muziso revanhu. Vanhu vazhinji vanonetseka kuti hakuna njodzi kutora NMN kwenguva yakareba, uye vamwe vanhu vanofunga kuti mhedzisiro yeNMN inongogara padanho rekuyedza mhuka ...